ပဲစင်းငုံနှင့် ပဲတီစိမ်းများ ဈေးနှုန်းမြင့်နေပြီး မတ်ပဲအသစ်ကို လှောင်လက်များက အပြိုင်အဆိ - Yangon Media Group
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း မန္တလေးမြို့ ပဲမျိုးစုံ ဈေးကွက်၌ လှောင်လက်သမားများ၏ အပြိုင်အဆိုင်ဝယ်ယူမှုကြောင့် မတ်ပဲအသစ်များမှာ ပစ္စည်းပြတ်လပ်သည့်အနေအထားသို့ရောက်ရှိနေပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ပြန်လည်တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့် ပဲစင်းငုံများမှာ ဈေးနှုန်းမြင့်တက် လာနေကြောင်း ပွဲစား၊ ကုန်သည်များ နှင့် စက်ပိုင်များထံမှ သိရသည်။
”ဒီလဆန်းပိုင်း(သင်္ကြန်မတိုင် ခင်)ကာလထက်စာရင် ပဲအမျိုးအစားအများစုက ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကို တွေ့ရပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြန်လည်ဝယ်ယူတော့မယ့် မတ်ပဲဟာဆိုရင် တစ်အိတ်ကို ကျပ် ၇ဝဝဝဝ ဝန်းကျင်နဲ့ ပစ္စည်းပြတ်လပ်သွားတာပါ။ ပဲစင်းငုံဖြူ(အသစ်)တစ်အိတ်ကို ကျပ်ငါး ထောင်ကျော် ဈေးတက်လာသလို ပဲစင်းငုံနီ(အဟောင်း)ကတော့ အ ဖြူထက် ပိုဈေးကောင်းနေပါတယ်။ ရန်ကုန်ဝယ်လက်တွေနဲ့ ပြည်တွင်း ပဲခွဲစက်တွေရဲ့ အလုံးအရင်းဝယ် ယူမှုကြောင့် ကုလားပဲအုပ်စုဝင် ပဲ တွေ တစ်အိတ်ကို ကျပ် ၈ဝဝဝဝ ဝန်းကျင်ဈေးကို ပြန်လည်ရောက် ရှိနေရာမှာ ပြောင်းဖူးစေ့တွေကို ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ရုတ်တရက် ဝယ် ယူမှုတွေရှိလာလို့ ဈေးနှုန်းတွေ တက်ရိပ်သန်းနေပါတယ်”ဟု မန္တ လေးပဲကုန်စည်ဒိုင်မှ ကုန်သည် ဦး ကျော်ကျော်က ဧပြီ ၂၂ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောကြား သည်။
ပြည်တွင်း စားသုံးမှုများသည့် ပဲထောပတ်၊ ပဲကြီး၊ မြေထောက်ပဲတို့သည်လည်း ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ် ၍ ပြောင်းဖူးဈေးများမှာ ထိုင်းနိုင် ငံမှ ဝယ်ယူမှုရှိလာသဖြင့် အထွက်တိုးပြောင်းတစ်အိတ်လျှင် ကျပ်သုံး သောင်းသို့ ဈေးမြင့်တက်လာပြီး မတ္တရာ၊ မုံရွာ၊ ပခုက္ကူ၊ ရေစကြို၊ စဉ့်ကူးဒေသဘက်မှ နွေပြောင်းများ စတင်ဝင်ရောက်လာလျက်ရှိကြောင်း ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) တစ်အိတ် ကျပ် ၈၃ဝဝဝ၊ ကုလားပဲဖြူလုံးကြီး တစ် အိတ် ကျပ် ၈ဝဝဝဝ၊ ပဲစင်းငုံဖြူ တစ်အိတ်ကျပ် ၈၈ဝဝဝ၊ ပဲစင်းငုံနီ တစ်အိတ် ကျပ် ၉၁၅ဝဝ၊ ပဲတီ စိမ်းရွှေဝါ(ခရမ်း)တစ်အိတ် ကျပ် ၁၂၄ဝဝဝ၊ ပဲကြီးတစ်အိတ် ကျပ် ၉၂ဝဝဝ၊ ထောပတ်ပဲတစ်အိတ် ကျပ် ၁ဝ၇ဝဝဝ၊ မြေထောက်ပဲတစ် အိတ် ကျပ် ၁၂ဝဝဝဝ အသီးသီး ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြ ကြောင်းသိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် မတရား ခိုင်းစေခံရသည်ဟုဆိုသော စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ အလုပ်သမား ၂၃ ဦး မ??
ဝင်းဂါး၏ နေရာဆက်ခံရန် ဗီအဲရာ အသင့်ဖြစ်နေဟု ဂွါဒီယိုလာ ထောက်ခံ
တရုတ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယွမ်ငွေ ၁၄ ဒသမ ၄ သန်းတန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီး ကာကွယ??
စက်တင်ဘာလအတွက် အကောင်းဆုံးအဖြစ် ဟာဇက်နှင့် နူနိုတို့ရွေးချယ်ခံရ
စက်မှုဇုန်များကို ၁၁ မြို့နယ်တွင် တစ်ပြိုင်နက် တည်ဆောက်ပါက မြေ အရောင်းအဝယ်သာဖြစ်သွားနိုင်၊